रवि लामिछानेसहित तीन जना पक्राउ, अब के हुन्छ ? - Postmandu
रवि लामिछानेसहित तीन जना पक्राउ, अब के हुन्छ ?
2019-08-15 2019-08-23 PostmanduLeaveaComment on रवि लामिछानेसहित तीन जना पक्राउ, अब के हुन्छ ?
काठमाडौं । चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने पक्राउ परेका छन् ।
पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा जोडिएका लामिछानेसहित युवराज कंडेल समेत पक्राउ परेका हुन् । यही प्रकरणमा अस्मिता कार्की समेत पक्राउ परेकी छिन् ।
नेपाल प्रहरीको टोलीले लामिछानेलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको हो । घटनामा संलग्न भनिएका तीनै जनालाई थप अनुसन्धानका लागि चितवन लैजाने छ।
शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण
शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या अगाडिको सनसनीपूर्ण भिडियो | रवि लामिछानले दिएका थिए यातना !भिडियो : 'नेपालआज'बाट
Posted by CEC tv nepal on Wednesday, August 14, 2019
रविलाई न्यूज २४ को कार्यालय पानीपोखरीबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन र काठमाडौं प्रहरी परिसरको टोलीले बिहीबार साँझ पक्राउ गरेको काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
चितवनको एक होटलमा मृत भेटिएका पूर्वसहकर्मी पुडासैनीले मृत्युपूर्व बोलेको भिडियो सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै प्रहरीले रवि लामिछानेलाई गिरफ्तार गरेको हो ।
पुडासैनीको सोही भिडियो वयानका आधारमा प्रहरीले रवि लामिछाने र युवराज कँडेललाई समातेको हो । लामिछाने, कँडेल र कार्की आत्महत्यालाई दुरुत्साहन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् ।
साउन २२ गते दिउँसो ३ः३० बजे होटलको २०२ नम्बर कोठामा गएका उनलाई होटलवालाले राति खान खान बोलाउँदा चुकुल नखोलेपछि प्रहरी बोलाएर ढोका खोल्दा उनी मृत भेटिएका थिए ।
नर्स अस्मिता पनि समातिइन्
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली,२०७५ अनुसार कसैलाई पनि पक्राउ गर्नका लागि पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति अदालतबाट लिनुपर्छ। जरुरी पक्राउ पुर्जी भनेको त्योभन्दा अर्जेन्ट अवस्थामा पक्राउ गर्नका लागि अपनाइने प्रक्रिया हो। यसका लागि पनि स्वीकृतिका लागि अदालतमा पेश गर्नुपर्छ। नियमावलीमा भएको व्यवस्था यस्तो छ
रवि कति दिन हिरासतमा ?
प्रहरीले अब बयान गराउने, कागज गराउने जस्ता प्रक्रिया गर्नेछ। यसका लागि कति समय लाग्छ अहिले नै यकिन भन्न सकिन्न। यो ११ दिनसम्ममा प्रारम्भिक अनुसन्धान र टेक्निकल अनुसन्धान भइसकेको हुनाले धेरै समय नलगाउन पनि सक्छ प्रहरीले। वा यही मौका हो भनी कसैको रिस भए त्यसलाई फेर्न उनलाई लामो समय थुन्ने सम्भावना पनि नहोला भन्न सकिन्न।
भोलि शुक्रबार अदालतमा पेश गरी प्रहरीले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न केही दिनको म्याद लिनसक्छ। बढीमा २५ दिनसम्म यसरी हिरासतमा म्याद थप्दै राख्न सकिन्छ। यसका लागि अदालतले अनुमति दिनु पर्छ। अथवा अदालतले रविलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जरुरी छैन भनेर अनुमति नदिन पनि सक्छ।
ट्राफिक प्रहरीलाई रक्षा बन्धन
प्रेमिकाको सलको पासो लगाएर प्रहरी जवानले गरे आत्महत्या
प्रहरी र विप्लव कार्यकर्ताबीच मुठभेड, एकको मृत्यु
2019-06-20 2019-06-23 Postmandu
श्रीमान विदेशमा, श्रीमती र प्रेमी जेलमा
2018-05-26 2018-05-26 Postmandu
मौसम अपडेटः तीन दिनसम्म वर्षा र हिमपात
2019-03-30 2019-04-01 Postmandu